Noma ubani oke waba wazama ukubhala izinkondlo, ebhekene yokuntuleka ugqozi, inkinga yokungatholi amagama afanele ukuze ahambisana. Nokho, ngaphansi izincomo ezilula ezimbalwa ukuze Lesi silwane esiyinkimbinkimbi ziyolibaleka. Kuyinto njalo kulula ukusebenzisa amathiphu uma ifake iimbonelo ezibonakalayo, njengokushintsha imvumelwano ukuba igama elithi "umuntu". Lokhu kuzosiza ku versification esizayo.
Indlela beveza imvumelwano ukuba izwi?
Into yokuqala ukuthi uyikhumbule - lokhu kuwuphawu ngokuvumelana amazwi rifmuemyh, okungukuthi, ukuba khona onkamisa ezifanayo noma ezifanayo ilunga wagcizelela, futhi ngezinye izikhathi kube sekupheleni izwi. Isibonelo, kahle ambalwa elithi "umuntu" ukuhluka ezifana "omunye", "kwempunga", "blonde". Lokhu kunengqondo, ngoba la mazwi inani elifanayo amaqoqo, indlela yabo yokukhuluma ku ilunga efanayo, futhi, ngaphezu kwalokho, zonke izibonelo ezintathu ukuqeda nge nse ezintathu izinhlamvu ukulandelana esiqinile. Nokho, imbongi isebenzisa imvumelwano, ngokuvamile ushayela yena ogibeni, njengoba umfundi kudala okubhekwe ukuvumelana ngokuphelele umkhiqizo imigqa elandelayo futhi mavesi. Ngu uqobo, bathethelele amathemba anjalo cishe akunakwenzeka ngenxa izici ulimi. Ngenxa yalesi sizathu, imvumelwano engcono igama elithi "umuntu", "isigodi", "ngezimoto", "izithombe", "edamini", njll ...
Generator imilolotelo - okubi noma okuhle
Imigomo esekelwe phezu kwayo umsebenzi imilolotelo generator silula: umsizi mechanical uzama ukuthola amagama aqukethe inhlanganisela efanayo kakhulu imisindo, kuhlanganise isikhundla ukucindezeleka. Le ndlela isebenza kahle Ukukhetha ezimweni lapho kuziwa imilolotelo owesilisa nowesifazane. "Omunye" ngakho iyona imvumelwano ngaphezulu ukuze izwi. Khona-ke, lapho ufunda ongakhetha ezihlongozwayo kubangele impendulo yangaphakathi imbongi, futhi ingasetshenziswa ngempumelelo imisebenzi. Nokho, ezinye imisebenzi generator kukhona ezimba. Dactylic futhi giperdaktilicheskie imvumelwano, isib, ungachazwa ukuthi ukucindezeleka ewela lesithupha wesithathu, wesine, wesihlanu noma sokuphela amazwi imvumelwano ilunga. Futhi iyiphi generator yakhelwe kuphela ukuze isebenze nge izwi, ngakho ahlaziye yonke umugqa bengayi.
Lapho imvumelwano kungenziwa dengwane
Ngenxa yokuthi abanye amazwi ezihloniphekayo sifanangwaca Pick kungaba nzima kakhulu, kukhona umbuzo ukuthi ukusebenzisa lolu noma ukuthi izwi. Uma lokhu imvumelwano izinkondlo, indlela ephelele aphume esibucayi kuyoba ukusetshenziswa kwamagama noma amazwi afana umqondo wokuqala. Uma lokhu kungeke kwenzeke, ungazama ukusebenzisa into ungwaqa ngaphezulu phakathi imilolotelo ababuthakathaka. Ungakhohlwa ukuthi kunezinhlobo ezithile zezinkondlo, okwenza ukuthi akusho ukuthi i umdlalo ngqo. zinhlobo ezinjalo zihlanganisa vesi mhlophe futhi mahhala. Kuyinto inketho kulabo izikhathi lapho akatholakalanga likhona yini izwi ezifanelekile ahambisana. Enye yalezi zinhlobo Ubuye isici okufana zomthetho njengoba ivesi isixazululo. Nokho, kufanele sikhumbule ukuthi wonke umsebenzi kumele kwenziwe nesitayela esifanako.
Ngakho, isibonelo izwi elula ehlanganisa amaqoqo amabili nokugqamisa ngosuku lwesibili, kungenzeka ukwenza izimiso eziyisisekelo versification, kubalulekile imfundamakhwela imbongi.
Chemistry: oxides, ngezigaba zabo nezindawo
Ifomu kokuqala sesenzo: Ngokuvamile, ukuhlonza nokusesha
Joyina i-Astrakhan Khanate. -Kuya Russian Astrakhan State
Pie "Angel Tears" - okumnandi khekhe dessert
Ngiziphi iinarha ze ukukhuluma isiJalimane kuka Germany?